Inqubo Yemajarini Isingeniso
Imajarini: Ukusabalala okusetshenziselwa ukusabalalisa, ukubhaka nokupheka. Ekuqaleni yadalwa esikhundleni sebhotela ngo-1869 eFrance nguHippolyte Mège-Mouriès. Imargarini yenziwa ikakhulu ngo-oyela namanzi esitshalo ahlanjululwe noma angenawo amanzi. Ngenkathi ibhotela lenziwa ngamanoni avela ...
Ukuthunyelwa kwe-Can ukwakha umugqa-2018
Kuthunyelwa ochwepheshe abane abaqeqeshiwe ukuqondiswa kokuguqulwa kwesikhunta nokuqeqeshwa kwasendaweni eFonterra Company. Umugqa wokwenza ikani wakhiwa futhi waqala ukukhiqizwa kusukela ngonyaka ka-2016, ngohlelo lokukhiqiza, sathumela ochwepheshe abathathu efektri yekhasimende ...
Ubisi lwekhambi kanye nobisi oluyibhokisi, yikuphi okungcono?
Isingeniso: Ngokuvamile, ubisi lwefomula lobisi oluyimpuphu ikakhulu lufakwa emathinini, kepha futhi kunamaphakeji amaningi obisi oluyimpuphu emabhokisini (noma ezikhwameni). Ngokwentengo yobisi, amathini abiza kakhulu kunamabhokisi. Uyini umehluko? Ngikholwa ukuthi abathengisi abaningi nabathengi a ...
Uyini umehluko we-Butter neMargarine?
Imargarini iyafana ekunambithekeni nasekubukekeni kwebhotela kodwa inokwehluka okuningana okuhlukile. Imajarini yasungulwa esikhundleni sebhotela. Ngekhulu le-19 leminyaka, ibhotela lase liphenduke ukudla okuyinsakavukela ekudleni kwabantu ababephila ngomhlaba, kepha lalibiza kakhulu kulabo ababengenalo. Loui ...
Imajarini: Ukusabalala okusetshenziselwa ukusabalalisa, ukubhaka nokupheka. Ekuqaleni yadalwa esikhundleni sebhotela ngo-1869 eFrance nguHippolyte Mège-Mouriès. Imargarini yenziwa ikakhulu ngo-oyela namanzi esitshalo ahlanjululwe noma angenawo amanzi. Ngenkathi ibhotela lenziwa ngamanoni obisi, imajarini yenziwa ...